Hagaha Socdaalka ee Penang Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hotels Friendly Hotels
Penang (Malaay: Pulau Pinang), oo caan ku ah Luulka Bariga, waa gobol ku yaal xeebta galbeed ee Jasiiradda Peninsular Malaysia. Juquraafi ahaan, gobolku wuxuu ka kooban yahay Pulau Pinang, ama Jasiiradda Penang, iyo Seberang Perai, marinka weyn ee jasiiradda u jeeda, oo ay u kala baxaan qayb yar oo ka mid ah Marinka Malacca.
Penang wuxuu hodan ku yahay dhaqanka iyo taariikhda, oo leh iskudhaf gaar ah oo saameynta Malay, Shiinaha, Hindida iyo Ingiriiska ah. Booqdayaasha waxay kaheli doonaan Penang dhismayaal taariikhi ah oo qurux badan, goobo diineed oo qurxoon, xeebo bacaad leh, kampungs oo ay ku hareereysan yihiin jardiinooyin bariis ah, keymo aad u fara badan oo aan la garaacin, dhammaantoodna lagu soo kordhiyay nolol aad u fara badan oo magaalada ah. Waxaa loo xirey inay tahay caasimada cuntada ee Malaysia mararka qaarna waxaa loo ekeysiiyaa Singapore 50 sano ka hor, Penang waxay noqotay meel caan ah oo leh dalab badan oo loogu talagalay kuwa soo booqda.
Jasiiradda Penang (Pulau Pinang)
George Town - Caasimadda Penang; oo ah goob ay ugu jecel yihiin dalxiisayaasha maaddaama ay leedahay guryo badan oo soo jiidasho leh Dagaalkii Labaad ee Adduunka ka hor iyo dukaanno, iyo sidoo kale kaniisado qarnigii 19aad, macbadyo, masaajiddo, iyo dhismooyin gumeysi. George Town waa goob UNESCO ah oo dhaxalgal ah (waxaa loogu qoray mid ka mid ah Magaalooyinka Taariikhiga ah ee Marinka Malacca iyo magaalada Melaka).
Air Itam - Waa magaalo inta badan degan galbeedka caasimada. Aagga waxaa badanaa booqda dalxiisayaasha u socda Penang Hill iyo Kek Lok Si Temple, laakiin sidoo kale waxay hoy u tahay xoogaa cunto maxalli ah oo gaar ah.
Batu Ferringhi - Xeebta woqooyi ee Pulau Pinang, aaggan waxaa ku yaal xeebo cadcad oo ciideed iyo hudheelo raaxo leh. Meel ay ugu jecel yihiin dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha labadaba. Magaalada dalxiiska u dhow ee Tanjung Bungah iyo tuulada kaluumeysiga ee Teluk Bahang sidoo kale halkan ayaa lagu soo daray.
Balik Pulau - Suugaan ahaan "Dhab ahaan Jasiiradda" oo ku taal Malay; magaalo yar oo ku dhex taal tuulooyinka Malayga, beero khudradeed, iyo beero. Caan ku ah assam laksa, durian, iyo nutmeg. Meesha loogu jecel yahay baaskiil wadista baadiyaha.
Bayan Lepas - Aagga ugu weyn ee wax soo saarka elektarooniga ah ee Penang iyo meesha uu ku yaal garoonka diyaaradaha caalamiga ah. Magaalada George Town ee dayax gacmeedka.
Dhul (Seberang Perai)
Butterworth - marinka weyn ee laga tago Penang, oo toos uga gudba Marinka Malacca oo ka yimaada George Town
Bukit Mertajam - caasimada Seberang Perai Tengah
Bandar Perda - 20 daqiiqo oo u jirta Butterworth iyo 15min oo u jirta Penang Bridge
Nibong Tebal - caasimada Seberang Perai Selatan
Simpang Ampat - waa magaalo yar oo caan ku ah cunnada badda ee u dhow Bukit Tambun iyo Batu Kawan. Jasiiradda u dhow ee Pulau Aman waa dalxiis caan ah oo usbuuc dhammaad ah oo waliba caan ku ah cunnada badda.
Seberang Jaya - dayax gacmeedka
Tasek Gelugor - waa magaalo yar oo 20 daqiiqo u jirta Butterworth
Qurxinta iyo si heer sare ah ayaa loo soo celiyay Khoo Kongsi, ama Khoo Clan House, oo ka mid ah dhismooyinka taariikhiga ah ee George Town
Penang wuxuu ka mid ahaa saldanadii Malay ee Kedah ilaa 1786, markii Captain Francis Light uu ka dhisay qalcad goobta George Town maanta oo uu ku guulaystay inuu jasiiradda u dhiibo shirkadda British East India. Jasiiradda, oo ay weheliyaan Malacca iyo Singapore, waxay ka mid ahaayeen saddexda degsiimmo ee Marinnada Ingiriiska.
Magaca Penang wuxuu ka yimid ereyga Malayga Pinang, taas oo macnaheedu yahay lowska betel (槟榔） (Areca catechu). Magaca Pulau Pinang lagu turjumay macno ahaan Malay micnaheedu waa "jasiiradda betel lowska". Magaca asalka ah ee Penang wuxuu ahaa Pulau Ka-satu ama "Jasiiraddii Kowaad", waxaa loo beddelay Amiirka Jasiiradda Wales 12 Aug 1786 si loo xuso dhalashada Amiirka Wales, markii dambe, George IV. Intii lagu gudajiray bilowgii iyo bartamihii qarnigii la soo dhaafay, Jasiiradda Penang waxaa sidoo kale loo yaqaanay "The Pearl of the Orient".
Caasimadda, George Town, waxaa loogu magac daray King George III ee Boqortooyada Ingiriiska. Maanta, Penang waxay leedahay cufnaanta ugu badan ee Malaysia waana gobolka kaliya ee ay ku badan yihiin qowmiyadaha Shiinaha. Gobolka Penang maanta wuxuu leeyahay dhaqaalaha seddexaad ee ugu weyn gobolada Malaysia, marka laga reebo Selangor iyo Johor.
Ganacsiga xamuulka ayaa inta badan u wareegay dhanka Port Klang iyo Singapore tan iyo markii Penang lumisay meeqaamkeeda dekedda xorta ah sanadkii 1969, laakiin hadda Penang wuxuu nolol wanaagsan ku noolaanayaa dalxiiska iyo soo saarista qalabka korantada. Shirkadaha badan ee qaran ee ka shaqeeya warshadaha xaafadaha ganacsiga ee Penang waxaa ka mid ah Intel, AMD, BBraun, Dell, Flextronics, Agilent, Osram, Motorola, Seagate, iyo Jabil Circuit. Penang waxaa la siiyay meeqaamkii internetka ee 'Cyber-City' taariikhdu markay ahayd 21-kii Juun 2004. Kulankii Guddiga Dhaxalka Adduunka ee bishii Luulyo 2008, George Town iyo Malacca waxaa lagu daray Liiska Dhaxalka Adduunka ee UNESCO.
Gobolka Penang wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, Jasiiradda Penang, jasiirad u eg qoolley oo ku taal Strait of Malacca oo 8km galbeed ka xigta Jasiiradda Peninsular Malaysia, iyo Seberang Perai (oo hore u ahaan jirtay Gobolka Wellesley), oo ah degmo qaab-qaabeed leh oo qayb ka ah dhul weynaha. .
George Town waa magaalada ugu weyn Penang. Horumarinta xeebta bari ee jasiiradda waxay si tartiib tartiib ah isugu xireysaa George Town, waqooyi-bari, iyo magaalada Bayan Lepas ee koonfur-bari. Xeebta waqooyiga, oo ay ku jiraan Batu Ferringhi, sidoo kale si aad ah ayaa loo horumariyaa waxayna leedahay xeebta iyo meelaha ugu fiican jasiiradda. Dhinaca galbeedka ee jasiiradda wali wax horumar ah malahan wuxuuna leeyahay qaab nololeed deggan oo ah “kampung” (tuulo) oo laga dareemayo.
Penang, sida Malaysia inteeda kale, waxay leedahay jawi dhulbaraha. Tani waxay ka dhigan tahay heerkul u dhexeeya 22 ° C / 72 ° F (habeen) iyo 30 ° C / 86 ° F (maalin), inta u dhexeysa 70% iyo 90% qoyaan, iyo wadarta guud ee roobab sanadle ah oo qiyaastii ah 2,400mm. Bilaha ugu qalalan badanaa waa Janaayo iyo Febraayo. Xilliga ugu qoyan badanaa waa inta u dhexeysa Sebtember ilaa Nofeembar oo sidoo kale bisha Ogosto aad u qoyan; duufaanno soo noqnoqda ayaa la fili karaa bilahaan.
Penang's xilli sare waxay ku dhowdahay Kirismas, Maalinta Sannadka Cusub, iyo Sannadka Cusub ee Shiinaha (hubi jadwalka dayaxa; waxay dhici kartaa dhammaadka Janaayo ama horraanta illaa bartamaha Febraayo), marka xeebta bari ee Malaysia ay biyo raacdo oo ay u soo baxaan dalxiisayaal qorrax doon ah. jasiiradda. Hoygu wuxuu u eg yahay in la buuxiyo, oo qiimahiisa la jaangooyo.
Madaarka Caalamiga ah ee Penang, markii hore Bayan Lepas International Airport, waa garoonka seddexaad ee ugu weyn Malaysia waxaana ku yaal Bayan Lepas, qiyaastii 16 km (9.9 mi) koonfur ka xigta George Town. Gegada waxaa ka shaqeeya in ka badan 15 shirkadood oo duulimaadyo leh duulimaadyo aadaya aagagga iyo waddammada Aasiya. Duulimaadyada gudaha waxaa ka mid ah Johor Bahru, Kota Bharu, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Kuantan, Langkawi iyo Malacca, oo inta badan ay ka hawlgalaan AirAsia, Malindo Air iyo dhowr meelood oo ay tagto Malaysia Airlines iyo Firefly. Duulimaadyada caalamiga ah waxay sidoo kale garoonka ka soo wacaan Banda Aceh, Bangkok, Guangzhou, Hong Kong, Jakarta, Krabi, Ko Samui, Medan, Phuket, Singapore, Surabaya iyo Taipei.
Gaadiidka dhulka xulashooyinka garoonka diyaaradaha waxay hoos yimaadaan laba qaybood, maxalli taksiyada ama dadweynaha baska nidaamka, Rapid Penang. Dabcan basasku waa ikhtiyaarka ugu jaban laakiin haddii aad rabto taksi madaxiisa dhanka miiska taksiga si aad ugu hesho kuubbo horay loo sii siiyay goobtaada gaarka ah. Dhowr bas ayaa ka duulaya garoonka diyaaradaha iyagoo tagaya meelo kala duwan oo ku dhow jasiiradda. Hadaad u socoto George Town raac bas 401 or 401E oo loo maro Way Quay (Maaha Balik Pulau), iyada oo Baska 401E uu yahay bas xawli ah. KOMTAR ama Weld Quay (terminus-ka) waa aagag wanaagsan oo baska laga dejiyo maadaama basaska kale badankood ay sidoo kale mari doonaan joogsiyada basaska. Qiimaha basku waa RM2.70 waddo kasta oo hubi inaad haysato qiimaha saxda ah maaddaama darawalka basku aanu ku siin karin adiga isbeddel.
Penang waxay kuxirantahay dhulweynaha iyo Waqooyiga-South Expressway by ay Buundada Penang, mid ka mid ah buundooyinka ugu dheer Aasiya, iyo Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Bridge, oo badanaa loo yaqaan Buundada labaad ee Penang, taas oo koonfurta ka sii dheer iyo xitaa ka sii dheer. Ma jiro wax lacag ah oo laga qaadayo baabuurta aadaya berriga labada buundo midkoodna, laakiin baabuurta aadaya jasiiradda waa inay bixiyaan lacag-bixin sida soo socota: Buundada Koowaad: mootooyinka: RM1.40, baabuurta: RM7, gawaarida waaweyn iyo gawaadhida leh laba geesood iyo afar giraangiraha: RM12. Buundada Labaad: mootooyinka: RM1.70, gawaarida iyo gawaarida kale oo leh laba axle iyo seddex ama afar taayir, marka laga reebo basaska: RM8.50, gawaadhida yar yar iyo baabuurta kale ee leh laba axle iyo lix taayir (marka laga reebo basaska, oo laga qaado RM26.20 .30.50): RMXNUMX.
Saldhigga tareen ee kuugu dhow ee Penang waa xarunta tareenka ee Butterworth oo ay maamusho Keretapi Tanah Melayu (Malayan Railway ama KTMB). Tigidhada dhammaan adeegyada waxaa laga dalban karaa saldhigyada tareenka, boosteejada laga raaco Butterworth ama khadka tooska ah. Way fiicantahay inaadan jadwalka tareenka dhigan daqiiqada ugu dambeysa (Boos celis ayaa lasameyn karaa horaanta 2 bilood kahor) maxaa yeelay waxaad arki doontaa in adeeggu uu noqdo mid buuxa inta badan usbuuc kahor safarka tareenka. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay baabuurta seexda habeenkii. jadwalka dhammaan tareenada ku socda wadadan.
Markaad tagto xarunta tareenka ee Butterworth waad u lugeyn kartaa dekedda maxalliga ah waxaadna u qaadan kartaa doonta ilaa George Town oo ku taal Penang. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan adeeggan ka eeg qaybta Dekedda Penang ee hoose. Beddelka kale ayaa ah inaad taksi ka raacdo xarunta tareenka una aado jasiiradda lafteeda, iyada oo loo sii marayo buundada Penang. Si kastaba ha noqotee tani waxay ku kacaysaa wax ka badan adeegga doonta.
Ka yimid Singapore / Kuala Lumpur
Waxaa jira hal adeeg oo tareen ah (Ekspres Rakyat) oo ka imaaday Singapore oo maalin walba ka amba baxda xarunta tareenka ee Woodlands saacadu markay tahay 08:45, waxay istaagaysaa Kuala Lumpur saacadu markay ahayd 14:56, waxayna kusii socotaa Butterworth markay timaado 21:20. Waxa kale oo jira adeeg maalinle ah (the Sinaran Utara) kaas oo ka bilaabma Kuala Lumpur, oo tagaya 08:45, wuxuuna yimaadaa Butterworth saacadu markay tahay 16:15. Intaa waxaa sii dheer, waxaa sidoo kale jira tareen habeen ah (the Senandung Mutiara) kaas oo ka taga Kuala Lumpur saacadu markay tahay 23:00 wuxuuna yimaadaa xarunta tareenka ee Butterworth 06:30. Adeegani wuxuu ka kooban yahay gawaarida hurdada iyo sidoo kale xulashooyinka fadhiga kuwa aan ka fiirsaneyn inay ku fariistaan ​​kursi.
La soco in tigidhada tareenka ee laga soo iibsaday Singapore meel kasta oo ka mid ah Malaysia lagu dallici doono doollarka Singapore oo ah saamiga 1: 1 ee qiimaha ringgit Malaysia. Sidaa darteed tigidh RM20 ah oo Malaysia ah wuxuu ku kici doonaa SGD20 gudaha Singapore, kaas oo laga qaado ringgit, oo ku kacaya RM50. Waxaa jira seddex qaab oo kaa caawin kara inaad ka fogaato tan:
Ka gudub xadka wadada Singapore ka dibna tareenka ka raac Johor Bahru.
Ka soo iibso tigidh tareen Singapore iyo Johor Bahru oo tikidh ka dambe ka iibso Johor Bahru wixii ka dambeeyay.
Ka dalbo tigidh soo laabasho oo laga helo Malaysia. Kuala Lumpur-Singapore-Kuala Lumpur waxaa lagu soo oogayaa ringgit welina wuu ka raqiisan yahay tigidhka hal-dhinac ee Singapore haddii lugta hore ee safarka aan la isticmaalin.
Ka yimid Thailand
Waxaa jira hal tareen habeenki ka baxa Bangkok Hualamphong (the Ekspres Antarabangsa) at 14:45 waqtiga Thai-ga wuxuuna imaanayaa maalinta xigta 13:51 waqtiga Malaysia. Tareenadu waa kuwo hawo leh oo ka kooban gawaarida hurdada kaliya iyo gaariga maqaayada.
Tareen maalinle ah ayaa sidoo kale ka amba baxa xarunta tareenka Hat Yai ee Thailand saacadu markay tahay 16:00 waqtiga Thailand wuxuuna yimaadaa Bukit Mertajam, oo ah saldhig u dhow Butterworth, saacada 21:47 ee Malaysia Halkan waxaad ka gaari kartaa rugta Butterworth ama Penang tagsi ahaan.
Basaska ku yaal George Town waxay yimaadaan/ka baxaan boosteejada basaska cusub ee Sungai Nibong, oo shan iyo toban daqiiqo u jirta bartamaha, iyo ilaa toban daqiiqo garoonka diyaaradaha. Taksi loo tago Xarunta ayaa ku kacaya RM20. Baska Rapid Penang 301 iyo 401E wuxuu aadaa KOMTAR iyo Pengkalan Weld (Weld Quay). Hawlwadeennada tababarayaasha waaweyn waxaa ka mid ah Shanta xiddigood oo leh jaale khadka tooska ah, Konsortium, Plusliner / Wanaagsan, Marmar, Iyo Mutiara.
Safarka ka yimaada saldhiga basaska ee Pudu Raya ee Kuala Lumpur ama Kota Bharu, Perhentian Islands midkiiba wuxuu ku kacayaa qiyaastii RM35 wuxuuna qaadanayaa 5-6h. Basaska taga / ka yimaada Johor Bahru iyo Singapore waxay qaadanayaan 10h waxayna ku kacayaan RM60 ama SGD45.
Waa suurtagal in bas lagu raaco oo laga yimaado Thailand. Tigidhada waxaa laga heli karaa dukaamada safarka ee ku yaal iyo hareeraha Penang Road. Qiimaha qaar iyo waqtiyada safarka waa:
Adeegga Minivan wuu ka qaalisan yahay adeegga basaska waxaana laga heli karaa inta u dhexeysa George Town iyo magaalooyinka Thailand sida Ko Phi Phi, Phuket, Trang, Surat Thani, Krabi, Ko Samui, Ko Pha-ngan, Bangkok iyo Hat Yai (RM40) maalin kasta. aasaaska. Adeeg ayaa loo heli karaa jasiiradaha Perhentian ee RM130-150, doonta ayaa lagu daray.
Ka yimid Langkawi
Adeegyada Doomaha Langkawi wuxuu shaqeeyaa laba jeer markab maalin walba inta udhaxeysa Swettenham Pier gudaha George Town, jasiiradda Penang, iyo Langkawi, iyada oo maalmaha ugu horreeya adeegga la joojinayo iyada oo loo marayo Pulau Payar en wadada. Doomaha ayaa la qorsheeyay inay ka baxaan Langkawi saacadu markay tahay 14:30 (iyadoo la marayo Pulau Payar) iyo 17:15 halka laga tagayo George Town saacada 08:15 (iyadoo la marayo Pulau Payar) iyo 08:30, iyadoo la qaadanaayo ilaa 2h 45min. Qiimaha qiimayaasha RM60 (celinta RM115) ee dadka waaweyn iyo RM45 (celinta RM85) ee carruurta. Tigidhada doonta waxaa laga dalban karaa khadka tooska ah halkan.
Swettenham Pier magaalada George Town waa barta safar ee Penang, iyadoo dalxiisyo fara badan halkan looga soo wacayo magaalooyin kale oo gobolka ka tirsan. Maraakiibta Star waa hawl wadeen aasaasi ah oo ka shaqeeya dekeddan oo leh safarro guud oo ay ku jiraan safar 1-habeen ah oo badda sare ah ama safar 3 habeen ah oo loo maro Krabi iyo Phuket ka hor inta uusan ku laaban George Town. Dekeddu sidoo kale waa joogsi joogto ah oo loogu talagalay adduunka oo dhan iyo safarrada waaweyn ee gobolka ee badanaa ka yimaada Singapore, Hong Kong, Australia, Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Caadi ahaan dalxiisyadan waxay u oggolaadaan booqashada dekedda George Town dhowr saacadood ka hor intaadan u sii gudbin meel kale. Waxaad tixraacdaa shirkadaha dalxiiska ee shakhsiga ah wixii faahfaahin ah ee ku saabsan marinnada dalxiisyadaas iyo muddada joogista deked kasta.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee aragga lagu arko waa inaad ku dhex wareegto George Town; laakiin xidho dhar khafiif ah, bilow subaxa hore, oo gasho qorrax-celin badan maalintii. Markaad goyneyso waddooyinka, xusuuso inaad labada dhinacba eegto, xitaa waddada hal dhinac ah.
Baska RapidPenang ee isaga gooshaya magaalada taariikhiga ah ee George Town, Penang
RapidPenang, adeegga basaska maxalliga ah, waxaa ku yaal basas cusub. Dhamaan boosteejooyinka basaska iyo joogsiyada basaska ee ay u adeegaan basaska RapidPenang waxaa lagu calaamadeeyay boodhadh sax ah si loo hubiyo in isticmaale-saaxiibtinimo. Basasku xoogaa ayey ku soo noqnoqdaan halbowlaha weyn ee ilaa Batu Ferringhi. Baska Rapid Penang 101 ee ku socda Teluk Bahang wuxuu marayaa bartamaha magaalada Pulau Tikus, (dhamaadka woqooyi galbeed) Gurney Drive, Tanjung Tokong, Tanjung Bungah, Batu Ferringhi (Starbucks waa meel fiican oo laga baxo oo xeebta laga helo), Tropical Spice Garden, Baxsad / Entopia waxayna ku egtahay halka laga galo Penang National Park.
Baska RapidPenang 203 iyo 204 oo tagaya Air Itam (RM1.50 qaangaar ah) wuxuu u amba baxayaa galbeedka dhanka Lebuh Chulia (wadada hoteelka ugu weyn ee boorsada) ama dhanka koonfur uga socota dhismaha KOMTAR ayaa ku habboon booqashada Kek Lok Si Temple iyo Penang Hill (Bukit Bendera) Funiciular Base Saldhigga, kudhowaad 30mins koonfur galbeed bartamaha magaalada. Darawalka ayaa ku ogeysiin doona goorta aad soo degayso. Bas 204 wuxuu ka amba baxayaa saldhiga funicular saldhigiisa si uu ugu laabto Komtar una sii socdo.
Xarunta ugu weyn ee basaska magaalada George Town waa KOMTAR, waa dhismaha ugu dheer magaalada. Xarunta labaad waxay ku taal Pengkalan Weld (Weld Quay) terminal-ka doonta. Dhammaan basasku waxay ka baxaan Terminal-ka doonta waxay istaagayaan KOMTAR, laakiin basaska ku socdaalaya magaalada hoose ee loo wado KOMTAR waxaa suuragal ah inaysan wada aadin illaa meesha laga raaco doonta; weydii baska. Waxaa jira boosteejo bas cusub oo masaafo dheer ah oo ku taal Sungai Nibong, tixraac bas gelitaanka.
Golaha Deegaanka ee Jasiiradda Penang oo ay weheliyaan RapidPenang ayaa bixiya a bas bas bilaash ah adeegga magaalada George Town oo la yiraahdo CAT (Transit Central Area Transit), oo soconaya qiyaastii inta u dhexeysa Pengkalan Weld terminal iyo KOMTAR 20kii daqiiqo ee kasta maalin kasta 06: 00-24: 00, (oo ay ku jiraan Axadaha iyo ciidaha dadweynaha). Booqo baska CAT wixii faahfaahin dheeraad ah.
Sidoo kale, ajaanibtu waxay ku iibsan karaan Baasaboor Degdeg ah RM30 waxayna ku raaxeysan karaan toddobaad safar aan xadidnayn oo saaran dhammaan basaska xawaaraha ku socda ee Penang.
Gawaaridan saddexda taayir leh ee ay ku shaqeysato dadka ayaa laga yaabaa inay noqdaan fikradda ugu fiican ee dalxiis wacan oo magaalo ah. Mid ayaa istaagi kara goob kasta si uu sawir uga qaado ama u iibsado xusuus. Qaar badan oo wadayaasha trishaw ayaa sidoo kale ah 'hagayaal safar'. Kala xaajoon qiimaha marka hore ka hor intaadan fuulayn xiisadda; waxaa lagugula talinayaa inaad shaqaaleyso iyaga saacad saacad indho indheyn ah.
Pulau Rawa, mid ka mid ah doomaha midabada badan ee dhalaalaya ee u dhexeeya Butterworth iyo Penang
Haddii aad rabto inaad u safarto inta u dhexeysa dhulweynaha iyo Jasiiradda Penang markaa Adeegga Doomaha ee Penang waa ikhtiyaar jaban oo gaar ah in la qaato. Doontu waxay ka shaqeysaa inta u dhaxeysa Butterworth oo ku taal saldhiga Sultan Abdul Halim ee ku yaal berriga iyo Terminal-ka George Town ee Raja Tun Uda. Weld Quay (Weld Pengkalan) jasiiradda Penang. Tareenadu waxay baxaan 10-20 daqiiqadood kasta inta udhaxeysa 05: 20–00: 40 maalin kasta iyadoo qiimaha lagu raacayo magaalada George Town uu ku kacayo RM1.20 dadka waaweyn ama RM0.60 ee carruurta. Lacagta lagu raaco Butterworth waa bilaash. Labada dekedoodba, Basaska Rapid Penang ayaa ku dhow si ay kaaga caawiyaan isku-xidhkaaga intiisa kale dhulweynaha ama Jasiiradda.
Kirada baabuurtu waxay noqon kartaa ikhtiyaar macquul ah, gaar ahaan haddii aad qorsheyneyso inaad ka baxdo wadada garaacday oo aad sahamiso galbeedka ama koonfurta xeebta jasiiradda. Ogsoonow in Jasiiradda Penang ay leedahay tiro wadooyin hal waddo ah iyo waddooyin cidhiidhi ah. Qaar badan oo ka mid ah dadka reer Penangites ah ayaa wata mootooyinka, kuwa laga tirada badan yahayna ma ixtiraamaan dadka lugeynaya, gawaarida, iyo xitaa noloshooda, sidaas darteed waa inaad aad uga taxaddartaa markaad baabuur wadid waddooyinka. Ka fogow wadista baabuurta inta lagu jiro saacadaha degdegga ah 07: 30-09: 30 iyo 17: 30-19: 30. Wadayaasha mootada waxay noqon karaan kuwo aan anshax marin oo dalxiisayaasha waa inay ka feejignaadaan iyaga.
Tagaasida Penang waxaa lagu qalabeeyaa mitir sharcigana waxaa loo igmaday inay adeegsadaan, laakiin ficil ahaan dhammaan wadayaasha baabuurtu way diidi doonaan inay shitaan. Had iyo jeer la jaanqaad darawal taksi oo ku heshii qiimaha ka hor.
Huteelada qaarkood, gaar ahaan Batu Ferringhi, waxaad ka heli kartaa SUVs buluug ah oo lagu calaamadeeyay “Teksi Executif” (Taksi Sare). Tagaasidani waxay adeegsadaan mitirka, laakiin way adag tahay in waddooyinka laga helo.
Si aad iskaga ilaaliso in aad u jajabiso qiimaha, iskuday inaad isticmaasho taksi aad ku dalbato taleefanka taleefanka casriga ah. Soo qabashada waxay si fiican uga shaqeysaa Penang. Faa'iido leh sidoo kale helitaanka qiimaha taksiga.
Waxaa jira meelo badan oo lagu kireysto baaskiil magaalada Georgetown. Waxa kale oo jira nidaam wadaagis baaskiil oo lagu magacaabo LinkBike. Waxay leedahay 25 saldhig oo sida caadiga ah 10 ama 12 sagxado baaskiil ah. Waxaad ubaahantahay inaad kala soo baxdo barnaamijkooda taleefanka casriga ah isla markaana aad bixisid xubinnimada muddada gaaban sida 1 ama 2 maalmood adoo adeegsanaya Visa ama Mastercard. Ka dib waad isticmaali kartaa baaskiilada sida ugu badan ee aad jeceshahay, 30-ka daqiiqo ee ugu horeysa waa bilaash ka dibna RM1 saacadiiba laakiin badanaa 30 daqiiqo ayaa ku filan hootada gaaban. Waxaa lagugu soo dalacayaa hal mar raacid 30 daqiiqo ka badan dhamaadka mudada xubinimadaada si aadan u helin lacag badan oo RM1 ah.
Ku dhowaad dhammaan dadka ku nool Penang waxay awoodaan inay ku hadlaan Malay, luqadda qaran ee Malaysia. Jinsiyadaha Shiinaha ee Penang (oo ah kuwa ugu badan) badanaa waxay ku hadlaan noocyo kaladuwan oo Hokkien ah oo loo yaqaan Penang Hokkien, kaas oo dadka ku hadla Minnan ee ka soo jeeda Taiwan iyo Fujian ay dhibaato ka haysato fahamkooda sababtoo ah aflagaadada iyo ereyada amaahda ah ee Malay. Inta badan qowmiyadaha Shiinaha sidoo kale waxay awoodaan inay ku hadlaan Mandarin iyo Cantonese. Qoomiyadaha Hindida ah badanaa waxay ku wada hadlaan Tamil iyo qowmiyadaha Maleys sida caadiga ah waxay ku wada hadlaan Malay, laakiin tiro aad u wanaagsan oo Hindi iyo Malay Penangites ah ayaa ku wada hadli kara Hokkien.
English waxaa si hufan ugu hadlaya inta badan xirfadleyda dharka cad iyo ganacsatada, iyo sidoo kale shaqaalaha adeegga ee ka shaqeeya hudheelada iyo meelaha loo dalxiis tago. Inta badan dadka kale ee deegaanka ka yar da'da 50 waxay awoodi doonaan inay kula xiriiraan Ingiriis jajaban, oo lagu kabayo qaababka isgaarsiinta ee aan hadalka ahayn sida tilmaamida iyo tilmaamidda. Markaad shaki gasho, u janjeer xagga dadka deegaanka ka yar, maadaama Ingiriisku ku kala duwan yahay Ingiriisiga uu yahay maaddo looga baahan yahay dugsiyada Malaysia. Ku dhowaad dhammaan dhalinyarada ama dadka waaweyn ee jira 20 ama 30s waa inay awoodaan inay si macquul ah ugu hadlaan Ingiriisiga.
Safarkii Habeenkii ee Penang oo ay weheliyaan Booqashada Masaajidka & Casho Xalaal ah
Markaad fuushan tahay, kaydso indhaha quruxda badan leh ee dhismayaasha dhaxalka George Town kahor intaadan ka dagin Masjidka Kabtanka Kilings.
Hoteelka B-Suite Penang
Deganaanshaha Gaarka ah ee Century Bay
Hotelka Copthorne Orchid Penang
Desa Pelangi Kondominium Penang
Bariga & Oriental Hotel Penang
Flamingo By Xeebta Penang
Afar Qodob oo uu qoray Sheraton Penang
Hoteelka Georgetown City (oo hore loo oran jiray Berjaya Penang)
Dalxiis Sands oo Dahabi Ah By Shangri La Penang
Hoteelka Equatorial Penang
Hoteelka Grand Continental Penang
Hoteelka Seri Malaysia Kepala Batas
Hoteelka Lone Pine Hotel Penang
Dalxiis Xeebeedka Paradise Paradise
Hotelka Sunway Seberang Jaya Penang
Hoteelka Gurney Resort & Degmooyinka Penang
Hoteelka Ixora Perai
Hotelka Northam All Suite ee George Town
Ganacsatada Hotel Penang
Hoteelada Tune Downtown Penang
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Malaysia > Hagaha Safarka ee Penang Halal